Imidlalo Engavuliwe 2020 - Amasayithi aphezulu ama-5 wokudlala ku-inthanethi - Ukudlala
Ukugembula ku-inthanethi kuyindlela elula yokuzijabulisa kulezi zinsuku. 2020 unyaka wokuthola izindlela ezintsha zokuzijabulisa. Kukhona amathani amawebhusayithi nezinhlelo zokusebenza ezitholakala ku-intanethi.
Lokhu kukunikeza okuqukethwe okuhle kakhulu ukuze uvuselele ingqondo yakho. Imvamisa kubalulekile ukuthatha ikhefu empilweni eyisidina. Sincoma ukuthi ubheke lo mhlahlandlela. Umgomo ukukunikeza amasayithi amahlanu amahle kakhulu ongawadlala ku-inthanethi. Lolu uhlu lwamageyimu wokuvula amasayithi azosebenza yonke indawo. Ngeke zibe khona izingqinamba nomhlinzeki wakho wenethiwekhi. Abasebenzisi bangazidlala endaweni yabo yokusebenza, emishinini yasekhaya noma yesikole.
Uhlu Lamasayithi Ahamba phambili Okudlalwa Amageyimu angavinjiwe:
Izikhathi eziningi amanethiwekhi angasese ezinhlangano ezimbalwa anemikhawulo ekhona. Lokhu kuyasebenza ukunciphisa imisebenzi yokuchitha isikhathi engadingekile. Ngokusebenzisa amawebhusayithi angavinjelwe wemidlalo, kuba lula ukuthatha ikhefu elincane. Noma ngubani angasebenzisa lezi zinketho kwi-PC yakhe. Lawa amawebhusayithi we-flash game ajwayelekile ku-intanethi. Nazi izinketho ezinhle kakhulu esizithole ku-inthanethi.
Iwebhusayithi evinjelwe inenqwaba yemidlalo yanoma ngubani othanda iziqu ze-flash. Kufaka ezinye zakudala ezinjenge-Happy Wheels, izinyoni ze-flappy nezinye eziningi. Isiza sibaluleke kakhulu kepha siza nomtapo wezincwadi ohloniphekile. Kunezinhlobo ezahlukahlukene abasebenzisi abangazihlola.
Ungakuthola kuyindlela enhle yokusebenzisa isikhathi sakho samahhala. Abantu abaningi bajoyina ipulatifomu nsuku zonke kusuka kumanethiwekhi wabo wekhompyutha abekelwe imingcele.Ngiyakujabulela umdlalo we-2048 kule webhusayithi. Kuyinto umdlalo othandwayo we-Smartphones kanye.Isihloko esilula siza sigcwele injabulo.
Kuneminye imidlalo eminingi emnandi njengale. Ibha yokusesha ikusiza ukuthi uthole izihloko zakho ozithandayo. Ilungele noma ngubani othanda amathegi asheshayo futhi asebenzisanayo. Iwebhusayithi isebenza kumanethiwekhi we-inthanethi avinjiwe njengesikole sakho nehhovisi. U-Eunblocked unemidlalo yama-flash kuphela manje. Isidlali se-Adobe flash sizocishwa kungekudala.
2. Imidlalo Engavuliwe Guru
Ukuvula imidlalo kungaba umsebenzi oyinselele. Kunqabile ukuthi kube namawebhusayithi ambalwa kakhulu ku-inthanethi eza nemidlalo emnandi eku-inthanethi. Iwebhusayithi ye-Unblocked games guru ilungele abafundi bezikole. I-interface yomsebenzisi inemibala futhi ihlukile. Ibuye inemidlalo ethile ehlelekile ye-HTML 5. Lokhu kusebenza nazo zonke iziphequluli zesimanje. Kunezinhlobo ezahlukahlukene ezitholakala kule nkundla. Ungahlola bese uzama lezo ezihlangabezana nezidingo zakho.
Idizayini yewebhusayithi iyisisekelo kepha ineziqu ezithile ezinhle. Ngiyayijabulela imidlalo yama-flash racing kuwebhusayithi.I-Ace gangster iza nesipiliyoni esithile se-gameplay.Kungumdlalo oyingqayizivele, nokho oqondile. Kulandela umugqa wesikhathi omkhulu wokweba.Wonke umuntu ujabulela umdlalo wobugebengu obumnandi kulezi zinsuku. Noma ngubani onesithukuthezi ehhovisi lakhe angazama.
3.Imidlalo evuliwe 66
Ipulatifomu ihlukile futhi ithandwa kakhulu phakathi kwabafundi besikole. Abaningi benu bangakusebenzisa lokhu vele. Kukunika ukufinyelela okulula kuyo yonke i-flash oyikhonzile ne-HTML 5 imidlalo mahhala. Kunezinhlobo eziningi nezinhlobo zemidlalo lapha. Ungadlala noma yini kusuka kwezemidlalo ukugqoka imidlalo. Iwebhusayithi ihlukile futhi ifinyeleleka kalula. Inenguqulo elula yeMinecraft futhi.
Abantu abaningi basebenzisa ipulatifomu kulabhulali yayo enkulu. Ukugqamisa kukhululekile ukudlala inguqulo yeMinecraft. Kungumdlalo okhokhelwayo, futhi abadlali abaningi abasebasha bayayijabulela le platformer. Isihloko singabiza. Wonke umuntu akatholi imvume yokuthenga imidlalo yakhe ku-inthanethi. Sithanda futhi okwakudala okufana neFlappy Bird, iSlither.io neTetris. Isebenza isikhathi esingu-100%. Sekukonke uzoba nesikhathi esihle nale nsizakalo.
Vakashela - https://sites.google.com/site/unblockedgames4me/ .
4.Vulela imidlalo pod
Iwebhusayithi intsha kubantu abaningi. Vulela i-pod yemidlalo inezihloko ezithile ezinhle.Izosebenza kunoma iyiphi inethiwekhi yesikole noma yehhovisi. Kuphephile kubavikeli bewebhusayithi. Imvamisa iwebhusayithi ayibonwa yilawo mathuluzi esoftware. Umtapo wezincwadi omkhulu uyimpahla yawo enkulu. Ungathola inqwaba yemidlalo yokubulala isikhathi esithile. Uma unesithukuthezi emsebenzini noma esikoleni, vakashela le webhusayithi.
I-interface yomsebenzisi nayo kulula ukuyiqonda. Ungagwema izikhangiso kanye ne-glady player player glitches. Akunciki kwizengezo zesiphequluli. Sijabulela ama-super Mario bros classic kuwebhusayithi. Ibuyisa izinkumbulo eziningi.
Awusadingi i-emulator futhi. Vakashela iwebhusayithi bese uqala ukudlala kukhompyutha yakho. Kulezi zinsuku imidlalo yokudlala isibe lula ngosizo lwamawebhusayithi anjalo. Ibha yokusesha ikusiza ukuthi uthole kalula izihloko ezinhle kakhulu.
Vakashela - https://www.unblockedgamespod.com/
5. Umhlaba womdlalo ovinjiwe
Izwe lomdlalo elingavinjelwe liyisengezo esilula kumasayithi wefomethi ye-Google. Ifinyeleleka kalula kunoma iyiphi ikhompyutha. I-interface yomsebenzisi epulatifomu ibalulekile. Bazama ukwenza umphakathi ngokusebenzisa iwebhusayithi yabo. Abasebenzisi bangacela amageyimu konjiniyela besebenzisa ifomu elilula le-google.
Kuyinsizakalo enhle kakhulu ekhathalela abasebenzisi. Kukhona amathani amathayili atholakalayo. Ungakhetha umdlalo ohlangothini lwesobunxele kwesikrini sakho.
Inamathani wezinketho ezisebenza kahle kakhulu. Iwebhusayithi ilula kepha ayivumelani nemidlalo. Isixhumanisi esilula sisiza iwebhusayithi ukuthi igweme ukutholwa kusuka kwisoftware blocker yewebhusayithi. Sijabulela umdlalo we-curveball kuleli sayithi. Kuyinto umdlalo omnandi wokudlala uma unesithukuthezi. Futhi banenguqulo yamahhala yomdlalo we-Doom wakudala.
Vakashela - https://sites.google.com/site/unblockedgameworld/ .
Ungazigwema Kanjani izikhangiso?
Izikhangiso ziyinkinga engapheli ngalezi zinhlelo zokusebenza. Abasebenzisi abaningi bazonda izimbungulu eziphikelelayo ozitholayo. Kungcono ukutshala imali kusevisi elula ukuyisebenzisa. Isoftware elula yokuvikela izosusa zonke izikhangiso ezicasulayo. Ama-pop-up nawo ayinkinga ejwayelekile ngalezi zinkundla zokudlala zamahhala. Nazi izinketho eziphezulu zokunciphisa izingqinamba zakho.
I-pop-up blocker izokuvimba ekutholeni izigelekeqe zesikhangiso ezicasulayo. Kulula ukuyifinyelela futhi ayidingi mzamo omkhulu. Vakashela - https://poperblocker.com/ ukuthola lokhu kusiphequluli sakho.
Okwe-AdBlock, siphakamisa ukususa isikhangiso se-hola. Kulula ukufaka isandiso sanoma isiphi isiphequluli. Ungayilanda esitolo sewebhu se-chrome.
Imidlalo evuliwe iyindlela enhle kakhulu yokusebenzisa isikhathi sakho sokuphumula. Ungaqeda ubumnandi futhi unciphise ukucindezeleka kwakho. Noma ngubani angajabulela ipulatifomu emnandi mahhala ngokuphelele. Kulo mhlahlandlela, sengeza ukukhetha kwethu okuphezulu okungu-5. Lokhu kufanelekile kubasebenzisi abathanda imidlalo ehlukile. Zizame namuhla futhi unciphise ukucindezeleka kwakho.
roblox imidlalo mahhala akukho thwebula
bukela ubude be-movie obugcwele ku-inthanethi mahhala
amawebhusayithi okungafanele uwavakashele
lapho ungasakaza khona imibukiso online